🥇 Barnaamij loogu tala galay qalabaynta ilkeed
Qiimeynta: 4.9. Tirada ururada: 600
Fiidiyowga barnaamijka barnaamij-ku-dirirka ilkaha
Dalbo barnaamij ku saabsan qalabaynta ilkaynta
Otomaatiga ilkaha si dhakhso ah ayuu u kobcayaa sababtoo ah helitaanka teknoolojiyada otomatiga. Barnaamij ka mid ah otomaatiga ilkaha, oo ka mid ah hababka farsamo ee otomaatiga ilkaha oo ah nooc ka mid ah waxqabadka ganacsiga, ayaa sidoo kale la adeegsadaa, laakiin waa dhif. Waxaad ka heli kartaa nuqullo dhif ah barnaamijyada otomaatiga ilkaha ee internetka, laakiin dhammaantood waxay u baahan yihiin lacag-bixinno joogto ah oo kaliya si loogu oggolaado inay ka dhex shaqeeyaan, ama kaliya ay ka maqan yihiin shaqooyinka ballaaran ee qofku jeclaan lahaa inuu ku arko arjiga sidan oo kale ah. Waxa ka reeban tan kor ku xusan waa USU-Soft - jiil cusub oo ah barnaamij otomaatiga ilkaha oo horumarsan. USU-Soft wuxuu mideeyay dhammaan astaamihii ganacsatadu ku farxi lahaayeen inay ku arkaan otomaatiga ilkaha. Barnaamijka otomaatiga ilkaha waa u fududahay in la isticmaalo mana sameeyo shuruudo bille ah ee khidmadaha rukunka si ay uga dhex shaqeeyaan. Barnaamijka otomaatiga ee dhakhtarka ilkaha wuxuu ku shaqeeyaa xitaa kombiyuutarka guriga oo fudud mana jiro qalab khaas ah oo loogu talagalay. Ceelka shaqooyinku waa faa iido weyn, maaddaama barnaamijka otomaatiga ilkaha uu ka heli karo qaab shaqo xarun kasta oo rug caafimaad ah una soo bandhigo otomaatiga qaabkiisa. Iyada oo kaa caawineysa barnaamijka otomaatiga ee ilkaha, waxaad xakameysaa saacadaha shaqada ee xubnaha shaqaalaha, ballan ayaad ka heleysaa bukaanka, xakamaynta daawada, xisaabinta kharashyada ku baxaya adeegyada, sidoo kale waxaad la shaqeysaa liisas dhowr ah oo qiimo leh iyo kooxo kala duwan oo macaamiil mar.
Barnaamijka otomaatiga ilkaha ee USU-Soft uma baahna wax badan kombiyuutarkaaga wuxuuna ubaahan yahay xoogaa meel ah si uu ugu guuleysto si guul leh. Waadna ku keydin kartaa macluumaad ahaan nuqul nuqul USB Drive-ka caadiga ah, si haddii wax dhacaan, si fudud aad ula soo baxdo macluumaadkaaga. Sidoo kale, barnaamijka otomaatiga ilkaha wuxuu la xiriiraa diiwaangaliyayaasha maaliyadeed, daabacayaasha rasiidhada, taas oo iyana dhankeeda si weyn u fududeysa xawaaraha shaqada macaamiisha waxayna kuu ogolaaneysaa inaad iyaga u soo saarto dukumiinti maaliyadeed oo caddeyn u ah adeegyada. Iyada oo gacan ka heleysa barnaamijka USU-Soft ee otomaatigga ilkaha, waxaad dejineysaa xakameynta iyo habsami u socodka howlaha hay'adda oo macno ahaan ka shaqeynaya otomaatiga. Isla mar ahaantaana, la shaqeynta bukaanku waxay noqotaa mid aad u dhakhso badan, taas oo kuu oggolaanaysa inaad adeegyo u siiso dad badan. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku dhex kororto hoggaamiye dhexdooda tartamaya oo aad hesho dakhli aad u badan.
Si aad u gaarto go'aanka otomatikada rugta caafimaadka, waxaad u baahan tahay inaad ka digtoonaato faa'iidooyinka aad ku leedahay hirgelinta tikniyoolajiyadan. Waxaan ku qori doonaa, fekerkeenna, faa'iidooyinka ugu waaweyn (dhaqaale iyo kuwa kaleba) ee rugta ilkaha ama xarun caafimaad ay ka heli karto hirgelinta barnaamijka maaraynta otomaatiga ah ee otomaatiga ilkaha. Faa'iidooyinkaan waxaa loo qaybsan karaa dhibaatooyinka waaweyn ee soo socda. Ugu horreyntii, waa ka-reebitaanka ama yareynta khataraha ay geysanayaan shaqaalaha damiir laawayaasha ah (u gudbinta bukaannada daaweynta lacag-bixinta ee rugaha kale, bixinta adeegyada hooska, qashinka alaabada). Marka labaad, waa edbinta maaliyadeed ee bukaanka (sida dhaqanku muujinayo, maqnaanshaha xakamaynta saxda ah ee maamulka, bixin la'aanta bukaanku waxay u horseedi kartaa shirkadda dhaawac weyn). lashaqee xogta macmiilka (baaritaanada kahortaga, wicitaanada sii wadida daaweynta); dhimista ka-maqnaanshaha bukaanka iyada oo loo marayo xusuusin taleefan iyo SMS
Badanaa dhakhaatiirta rugaha caafimaadku ma xukumaan bixinta bukaanka, taas oo uga tagaysa damiirka maamulka. Tan waxaa laga yaabaa inay xaq tahay, maxaa yeelay dhakhtarku waa inuu ugu horreyn xiiseeyaa habka daaweynta. Barnaamijka kumbuyuutarka ee otomaatiga ilkaha wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si cad ula socoto deyn bixiyaasha, xusuusiso deynta ay ku leeyihiin booqashada bukaan socodka ee soo socda, iyo inaad la socoto muddada barnaamijyadooda caymiska. Sidee uga badbaadin kartaa naftaada khasaaraha? Barnaamijka otomaatiga ilkaha wuxuu ku xasuusin karaa deynta kaliya waqtiga diiwaangelinta ee adeegyada la bixiyay, laakiin sidoo kale waqtiga imaatinka bukaanka ama xitaa xilliga diiwaangelinta bukaanka ee jadwalka. Tani waxay u oggolaaneysaa maamule inuu bukaanka ku xusuusiyo deynta waqtigeeda, oo laga yaabo inuu dib u dhigo adeegyo qaali ah oo dheeri ah illaa inta deynta laga bixinayo. Qeyb gaar ah ('Suuqgeyn') ayaa kuu oggolaaneysa inaad sameyso xulasho deyn si aad ula shaqeysid si gaar ah si loo xiro deynta. Barnaamijka USU-Soft ee otomaatiga ilkaha wuxuu xasuusinayaa barnaamijyada caymiska dhacay.
Waxaan ku bixinaa barnaamijka tayada badan ee waxqabadka leh oo otomaatig ka dhigaya dhammaan qeybaha daryeelka ilkaha iyo tan oo dhan qiime jaban Codsiga USU-Soft wuxuu ka kooban yahay qaybo software qiimo jaban oo tayo sare leh oo si firfircoon loo xulan karo ama loo baahdo. Qeybaha ayaa la iibsadaa hal mar oo dhan mana jiraan wax khidmad rukumo ah oo qasab ah.
Codsiga USU-Soft waxaa loogu yeeri karaa mid caalami ah, maadaama lagu hagaajin karo ganacsi kasta. Waxaan falanqeynay barnaamijyo badan oo la mid ah, waxaan tixgelinay khaladaadka inta badan barnaamijyayaashu sameeyaan waxaanan la imaanay go'aan ah in nidaamkeenu ahaado mid fudud sida ugu macquulsan, si howsha looga shaqeynayo looga dhigo mid fudud oo aan ka sii dhib badneyn. Natiija ahaan, waxaad heleysaa nidaamka ka dhigi kara hababka shaqada mid ka sii wanaagsan, oo leh tayada cusub ee xawaaraha iyo saxsanaanta. Awoodda arjiga kama yaabin karto awoodda otomatiga ee teknoolojiyada casriga ah. Kaliya tiknoolajiyada casriga ah ayaa xaqiijin kara guusha horumarka shirkaddaada.